Bodu Bala Sena (Army of Buddhist Power) - WRSP
Bodu Bala Sena (Agha nke Buddhist Power)
Oge BODU BALA SENA (BBS)
1975 (March 4): Galagoda Atte Gnanasara mụrụ.
1992 (Jenụwarị 2): Ven. Kirama Wimalajothi mepere Buddhist Cultural Center na Dehiwala, na ndịda Colombo.
2004: E hibere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa mbụ nke ndị mọnk Buddha, a na-akpọ Jathika Hela Urumaya (National Heritage Party). BBS bu ihe ndi ozo.
2012 (May 7): A malitere Bodu Bala Sena.
2011 (May 15): Onye isi ala Buddhist Cultural Center mepere President Mahinda Rajapaksa, na ebe ọhụụ ya n'obodo Colombo, na Sambuddha Jayanthi Mandira complex. Nke a bụkwa ebe isi ụlọ ọrụ BBS dị.
2012 (June24): BBS wakporo Sirivardhana Buddha, onye Buddha a ma ama, ma na-arụ ụka na Vanduramba, Galle District.
2012 (July28): BBS mere mgbakọ mba mbụ ya na Halllọ Nzukọ Ezumezu International nke Bandaranaike.
2012 (Ọktọba 14): Ndị BBS wakporo "ụlọ ụka ụlọ" na Homagama, na ebubo na ndị otu ọgbakọ ozi akpọrọ Aha Onye-nwe-ayi Jisus nọ na-anwa ịgbanwe Sinhalese Buddhist.
2012-2013: E boro BBS ebubo na ị wakporo ebe ndị Alakụba na nke Ndị Kraịst dị ka ọ na-ewere ọrụ nke ndị uwe ojii. Na 2012, a na-echekarị nlezianya a na Buddhist "ndị jụrụ okwukwe" na ụlọ oriri na nkwari akụ ha na-ekwu na azụmahịa Buddha, ma na 2013 mkpọsa ndị Alakụba na-achịkwa ọrụ ha.
2013 (February 17): Na nzukọ ọha na eze na Colombo dịpụrụ adịpụ nke Maharagama, BBS mere ka ọha mara "Nkwupụta Maharagama," nkwupụta okwu iri megide ụfọdụ omume ndị Alakụba, dị ka asambodo Hala, na uwe ụmụ nwanyị, dịka nikab na abaya .
2014 (June 15 na 16): Ndị Alakụba wakporo ndị Alakụba bi na obodo Aluthgama, Dharga Town, Valipanna na Beruwela mgbe nzukọ BBS gasịrị (nke a na-akpọkarị "ọgba aghara Aluthgama").
2014: Dị ka ụzọ isi katọọ BBS, nzukọ ahụ zutere ebubo na ndị mọnk ya nwetara nkwado site na ike ndị ọdịda anyanwụ, gụnyere Norway.
2014 (June 20): Emlọ ọrụ Embassy nke Norwegian na Colombo wepụtara nkwupụta mgbasa ozi nke ọ gọnahụ njikọ ọ bụla dị n'etiti steeti Norway na Bodu Bala Sena.
2015: Ven. Kirama Wimalajothi gbara arụkwaghịm na BBS, na nke ọzọ n'ihi itinye aka na BBS na ọgba aghara Aluthgama. Wimalajothi kwupụtara n'ihu ọha na omume ndị mọnk BBS megidere nkuzi Buddha.
2015 (June): BBS kpebiri ịdebanye aha, ya na Eksath Lanka Maha Sabha, dị ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'okpuru aha Bodu Jana Peramuna Sri Lanka (BJP) na ịgba ọsọ maka ntuli aka ndị omeiwu na August.
Sri Lanka nwere nnwere onwe nwere akụkọ ihe mere eme nke ndị otu Buddhist na-emegide onwe ha na ndụ ọha, nke ebumnuche ya bụ "iweghachi okpukpe Buddha" n'ọnọdụ "ziri ezi" n'etiti ọha mmadụ. N'ikwu ya n'ozuzu, anyị nwere ike ịsị na n'agbanyeghị mgbanwe dị iche iche, ndị otu a nwere ọdịnala sara mbara nke Buddha ọchịchị. "Okpukpe Buddha a" na-ezo aka n'ụkpụrụ echiche ndị na-ekwu na Buddha kwesịrị ịduzi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ọzọ na ọ bụ ọrụ obodo ịchekwa na ịkwalite Buddha. “Okpukpe Buddha” na Sri Lanka gosipụtara echiche oge a kpọmkwem nke mepụtara na ọkara ikpeazụ nke narị afọ nke iri na itoolu megide mwepu nke ndị Buddha site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na site na 1930s gaa n’ihu, dị ka echiche nke nabatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ bụ Buddhist ndị nkịtị na ndị otu ndị mọnk na-ekwupụta ma na-arụ ọrụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Buddha sangha (Frydenlund 2016).
Otu kachasị dị egwu (na nke kachasị ọgụ) bụ Bodu Bala Sena (Army of Buddhist Power), ma ọ bụ BBS, nke e guzobere na 2012, site na obere ìgwè ndị mọnk Buddhist na ndị nkịtị. Onye mọnk kachasị elu (nke a na-esite na otu a ugbu a) bụ Ven. Kirama Wimalajothi, onye mọnk nwere ahụmahụ nke nọrọ ọtụtụ afọ na Malaysia. [Foto dị n'aka nri] Mgbe ọ laghachiri na Sri Lanka, Wimalajothi malitere na 1992 Buddhist Cultural Center na Southern Colombo, nke na mmalite 2000s ghọrọ ụlọ ahịa Buddhist a kwadebere nke ọma na ebe obibi akwụkwọ. Ka ọ na-erule afọ 2011, Buddhist Cultural Center akwagala na etiti obodo wee ghọọ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nde ọhụụ. Onye isi oche Mahinda Rajapaksa mepere Center ahụ na 15 May 2011, ma a na-ahụkarị etiti na BBS ka ha na-arụ ọrụ n'okpuru nku nchebe nke Onye isi ala Rajapaksa.
Ebumnuche Wimalajothi´ bụ ogologo oge iji wusie ọnọdụ Buddha ike na ọha mmadụ. Na mgbakwunye na ulturallọ Ọrụ Omenala Buddhist, o guzobewo ebe etiti maka ọrụ ịtọgbọ, ntinye oge maka ụmụ nwoke n'ime usoro ndị mọnk (nke dị iche na Myanmar na Thailand anaghị eme na Sri Lanka), yana ịhọpụta ụmụ nwanyị na nye iwu (bhikkhuni echichi). Tụkwasị na nke a, Wimalajothi egosila nchegbu maka ọdịbendị ọdịnala Sinhala, dị ka nri ọdịnala na ọgwụ, yana nsonaazụ ogologo oge nke mbugharị ọrụ na Middle East maka ezinụlọ Sinhala. Dị ka anyị ga-ahụ, nchegbu ndị a na-apụta ọzọ n'echiche BBS.
Mgbe Wimalajothi bụ (ruo mgbe 2015) bụ onye isi na onye nlekọta nke BBS, ọ bụ obere mọnk karịa, Ven. Galagoda Atte Gnanasara (onye isi odeakwụkwọ BBS) bụ onye ghọrọ ihu ọha na ọgba aghara na mpaghara ọha. [Foto dị n'aka nri] Gnanasara esonyela n'òtù ndị na-akwado okpukpe Buddhist na 2000s, ọbụnakwa gbaa ọsọ maka nzuko omeiwu maka Jathika Hela Urumaya, otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị mọnk Buddhist guzobere na 2004. Mgbe ọnwụ mberede nke onye mọnk Buddha na-adọrọ adọrọ. Ven. Soma Thero na Disemba 2003, otu ndị mọnk "ịhụ mba n'anya" hibere n'afọ 2004 otu ndọrọndọrọ ọchịchị mbụ nke ụwa nwere ndị mọnk Buddhist, nke akpọrọ Jathika Hela Urumaya (National Heritage Party), nke ndị BBS bụ ngalaba.
Ihe dina n’etiti ntọala BBS bụ Dilanthe Withanage, onye nkịtị, onye were aha ya “Chief Executive Officer”. Withanage rụkwara ọrụ dị ka ọnụ na-ekwuchitere BBS wee pụta n'ọtụtụ mkparịta ụka na ajụjụ ọnụ, gụnyere mgbasa ozi mba ụwa dịka al-Jazeera ebe ọ nọ na arụmụka iyi na 2014 gbachitere mkpa ọ dị "ichebe Buddha" site na "ntụgharị na Islam".
Na Mee 2015, Wimalajothi kwupụtara n'ihu ọha na ọ ga-agba arụkwaghịm na BBS, na nke ọzọ n'ihi BBS itinye aka na ọgba aghara Aluthgama. Na June 2015, ya na United Lanka Great Council (Eksath Lanka Maha Sabha) ndị BBS kpebiri ịdebanye aha dị ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Bodu Jana Peramuna Sri Lanka (BJP), si otú ahụ na-abawanye asọmpi ya na JHU maka "vootu Buddhist" na ntuli aka izugbe na Sri Lanka n’afọ ahụ. BJP zọrọ mpi na mpaghara iri na isii na ntuli aka, mana ọ nwetara naanị pasent 0.18 nke ntuli aka nke mba.
Ebumnuche zuru ezu nke BBS bụ ichebe Buddha na Sinhalese, ọkachasị site na ihe ha lere anya dị ka mwakpo mba ọzọ. Movementtù a na-agwakọta nchegbu nke Buddhist "onye isi ala" nke nchekwa ụwa, ọdịiche nke ọha mmadụ na mmebi iwu Buddhist n'ihi ijikọ ụwa ọnụ, yana nchegbu pụrụ iche nke mba Sinhala dị ka ọdịbendị na ihe nketa Sinhala. Ọ na-ekwusi ike ịchịkwa asụsụ na asụsụ Sinhala nke agwaetiti a n'oge gara aga na nke oge a ma na-akatọ mba ụwa ikike ụmụ mmadụ, ọkachasị ikike pere mpe. Ọ bụ nchegbu banyere Islam.
Na nzukọ mmeghe ya na Colombo na July 2012 ndị BBS kwupụtara ebumnuche ya ịchụso ebumnuche ise: 1) iji rụọ ọrụ maka mmụba ọmụmụ ọmụmụ nke ndị Buda Budhaist Sinhala site na ịma aka nchịkwa gọọmentị na atụmatụ ezinụlọ; 2) ndozigharị iwu iji kpuchido ikike nke ndị Buddhist agwaetiti ahụ, iji kagbuo ọtụtụ iwu kwadoro ma mejuputa otu koodu obodo (si otú a wepụ iwu ezinụlọ Muslim); 3) ndozigharị nke usoro agụmakwụkwọ kwekọrọ na ọdịmma Buddhist; 4) nguzobe nke ndi nkwado nke ndi ochichi iji kwado “orthodoxy” Buda na akwukwo na mgbasa ozi; na 5) ntinye nke usoro nke usoro maka imeghari okpukpe Buddha nke a tụrụ aro na 1950s. Mkpebi a “okpukpu ise” na-egosipụtakwa mmachi gọọmentị machibidoro ụmụ nwanyị na-eme njem ụmụ nwanyị Sri Lanka na Middle East. Mmegbu nke ndị ọrụ Sri Lanka na Middle East abụwo okwu esemokwu na Sri Lanka kemgbe, a na-ahụkarị ya dịka okwu okpukpe site n'aka ndi otu ochichi Buddha, tinyere BBS.
Ileba anya na ihe ndi Islam choputara na echiche nke BBS na ekpughere na okwu ndi Muslim na-emegide di iche-iche. na-eje ozi dị iche iche na nchegbu: ụfọdụ okwu na-emetụta asọmpi azụmahịa nke obodo, ebe ndị ọzọ na-egosi ndị Alakụba na Islam dị ka ihe iyi egwu na steeti. Otu nkwupụta okwu BBS a ma ama na-ekwu banyere okwu dị iche iche nke ọdịbendị, ụmụ amaala, na ikike ụmụ mmadụ, na-akọwa ndị Buddha dị ka "ndị ọbịa" na ndị Alakụba (na ndị obere okpukperechi ndị ọzọ) dị ka "ndị ọbịa," ndị nwere ikike nwere ikike pere mpe. N'okwu ihu ọha na Colombo n'oge 2013, [Foto dị n'aka nri] ndị BBS rụrụ ụka na ọ bụ ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ na ndị pere mpe ga-ebi na mba [n'ụzọ] nke na-adịghị eyi egwu ọtụtụ agbụrụ na njirimara ya, na, Ọzọkwa, nke ahụ ndị Alakụba enweghị ekele nye ndị ọbịa Buda Buddhist ha. N'ajụjụ ọnụ emere na 2014, Withanage kwuru na "[abụghị m] ndị Sinhala Buddhist nọ n'ihe egwu. Anyị bụ ndị anyị na-ebi n’egwu. Ndị isi okpukpe Buddha Sinhala anyị enweghị enyemaka n'ihi ike dị ukwuu nke ndị a akpọrọ pere mpe. " Ọzọkwa, n'oge okwuchukwu ndị mọnk BBS ekwuola na ndị Alakụba nọ na Sri Lanka dị ka "mmụọ ndị anyaukwu" na-eyi egwu ọtụtụ agbụrụ na njirimara ya. Nkwupụta okwu dị otú a na-eleghara Sinhala Buddhist anya udo ruo otu puku afọ na agbụrụ agbụrụ na asụsụ asụsụ ndị Alakụba dịgasị iche iche nke Sri Lanka.
Ọ bụ ezie na ndị Buddha-Muslim na-ebikọ ọnụ na Sri Lanka bụ iwu karịa ndị ọzọ, BBS na-ewuli ndị Alakụba obodo dị ka ihe iyi egwu na nchekwa mba. Ndị mọnk BBS na-ahụ ndị otu ndị Alakụba na-ahụ maka obodo ka ndị nnọchi anya nke netwọkụ na-eyi ọha egwu na ndị nnọchi anya mpaghara nke alaeze ụwa. Ndị BBS ebipụtawo akwụkwọ mmado na-egosi Sri Lanka dị ka a nikab - nwanyi ejiri uwe nke nwere anya uhie-uhie, me ka amata ihe nikab dị ka ihe nchebe nchekwa na steeti na ókèala ya. Okpukpe Buddha na-agbanwe agbanwe enwetawo nkwado a na-atụghị anya ya site n'iji ihe ịga nke ọma na-emetụta nchegbu obodo na mkpu mba ụwa. Okwu zuru ụwa ọnụ banyere ụjọ na ụdị ọhụụ nke usoro mgbasa ozi na-eme ka Buddhist na-atụ egwu Islam.
Gbanwe ọnụọgụ ụwa na mmụba a na-atụ anya na ọnụọgụ ndị Alakụba gburugburu ụwa bụ okwu ọzọ metụtara BBS. Ezie na ọnụ ọgụgụ nke ndị Alakụba bi na Sri Lanka na-agbagha, na ebubo mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị Alakụba dị ezigbo mkpa nye BBS dịka mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị Alakụba na-ahụta dị ka ihe iyi egwu dị adị nke Buddha dị ka ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ọdịbendị n'ụwa. Ndị BBS na-ekwu na ọha mmadụ Buddha ga-emecha bụrụ ndị Alakụba, ọ bụghị site na nrụgide nke mpụga kama site na mgbanwe mgbanwe nke ndị Alakụba na ndị Buddha na ọnụ ọgụgụ ha. Iji gbochie “ndị Buddha ịbụ ndị pere mpe n’obodo ha” (dị ka okwu a na-ekwu), otu ndị Buddhist na-eme mgbanwe akpọrọ oku maka atụmatụ atụmatụ ezinụlọ, ọbụlagodi usoro iwu gbasara ahụike ụmụ nwanyị. Na nzukọ mmeghe nke BBS na 2012, ndị isi BBS rịọrọ ka gọọmentị mechie usoro atụmatụ ezinụlọ niile na mba ahụ ka ụmụ nwanyị Sinhala wee nwee ike ịmụtakwu ụmụ. N'ikpeazụ, ndị BBS gosipụtara nchegbu na nkwụsị nke ndị Buda Buddhist Sinhala ga-egosi nkwụsị nke ọnụ ọgụgụ ndị mọnk, n'ihi na obere ezinụlọ nwere ike ịnye otu n'ime ikekwe ụmụaka abụọ nke obere ezinụlọ iji nye iwu.
Nchedo nke Buddha na agbụrụ Sinhala bụ ebe a maara nke ọma na mba Buddhist nke Sinhala, yabụ ihe ọhụrụ nke BBS dị n'okwu siri ike nke ndị Alakụba, ọgụ ya na oghere ọha na ịkparịta ụka n'networkntanet. Isi okwu a dị ịrịba ama karịsịa. Na 2014, ndị BBS na ndị omekome Buddha nwere 969 na Mianmaa nwere njikọta ọnụ iji gbanahụ Buddha site na ihe ha chere dị ka iyi egwu ndị Alakụba. Ruo ókè ole ka a ga-agbakọta 969 na BBS dị ka "Buddhist nationalism" ka a gbara aka (Schontal and Walton 2016). Agbanyeghị, ọ nwere ike igosipụta mbugharị site na njirimara ndị agbụrụ na-agbakwunye na mpaghara nke okpukpe Buddha nke doro anya, nke na-ebute ozi ha na-emegide Muslim na mkpa dị mkpa yana ịdị mkpa (Frydenlund 2015). N'ọtụtụ echiche, BBS na 969 dabara n'ụdị oge ochie nke neo-traditionalism (ma ọ bụ nkwenkwe okpukpe) ebe a kọwara dị ka ọchịchọ ịchọrọ ịrụ ọrụ megide ọdịiche nke ụlọ ọrụ nke ọchịchị colonial, nke oge a, na nke ụwa na-eweta. Dabere na MoU bịanyere aka na Colombo, “mwakpo aghụghọ dị iche iche na-ewere ọnọdụ nke echiche ụwa, ọdịbendị, na nke ndị ọzọ. . . . kwụrụ ụgwọ site na esenidụt. . . ji nwayọọ nwayọọ na-agbasa n'ọnọdụ ndị dị n'ógbè ahụ. ”
Nsacha okpukpe dị n'ime bụ ihe ọzọ, mana anaghị eleghara echiche BBS anya (Deegalle 2016). Ọ bụ ezie na akọwapụtaghị ndị iro Buddhist na abụm BBS (mana e nyere BBS siri ike megide Christian na mgbochi Muslim, a tụgharịrị ya ebe ọ bụ obere ndị Buddha na Sri Lanka), ukwe ahụ na-ezo aka na Buddha ụgha. Na June 24, 2012, ndị BBS busoro Sirivardhana Buddha agha, onye a ma ama, ma na-arụ ụka Buddhist dina onye nkwusa na Galle District bụ onye kwuru na ọ bụ Buddha n'ọdịnihu, Maitreya. Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, ndị BBS chọrọ ka ndị Minista Buddhist Affairs mee ihe megide Sirivardhana bụ ndị ha kwuru na kparịrị okpukpe Buddha.
Ndị BBS anaghị anọchite ụdị okpukpe Buddha ọzọ, ndị otu ya na ndị nwere ọmịiko nọ na "isi" Buddhist ụlọ ọrụ mmụta na omume na Sri Lanka. Ndị BBS na-ahazi nzukọ na oghere ọha, nke na-emeghe maka ọha na eze. Na nzukọ ndị dị otú ahụ, ndị mọnk BBS na-ebute okwu metụtara, dị ka nkwenkwe ndị Kraịst ma ọ bụ asambodo Halal na Sri Lanka. [Foto dị n'aka nri] Nzukọ ndị ahụ nwere ụdị nkwusa Buddha (akpọrọ bana na Sinhala) nke ndi mọnk Buddha no na oche palladium ebe ha na ekwu okwu, ebe ndi ọcha ndi yi uwe ha yi uwe nodu ala. Ven. Gnanasara bu onye amara amara, ndi BBS kesakwara egwu ya banyere amaokwu nchedo site na akwukwo Pali (dika Jaya Piritha) site na weebụsaịtị ha. Site n'echiche nke nkwenkwe, BBS na-anọchite otu ụdị okpukpe Buddha nke oge a, nke na-emesi ike ịmaliteghachi omume Buddha site na ịnabata mkpa nke ọha mmadụ nke oge a. Dịka ọmụmaatụ, na-eduga ndị mọnk BBS na-akwado nkwado nwa oge maka ndị nkịtị ka ha banye n'usoro ndị mọnk (nke a na-anaghị eme na Sri Lanka n'ụzọ dị iche na Thailand na Myanmar), ha na-akwado ndị nọn, bụ nke na-achọ ịmaliteghachi iwu nke ndị nọn (nke na Theravada Buddha ọ bụghị nke iwu kwadoro kemgbe ọ dara na narị afọ nke iri na otu CE). Ndị BBS na-echegbu onwe ha maka ịdị ọcha a na-ekwu na nkuzi Buddha, ọ na-ebuso ụdị Buddhist "ama" ama ama, ofufe chi na mgbanwe okpukpe ọhụrụ, dịka mwakpo ha mere na onye nkwusa ụta bụ Sirivardhana.
BBS bu nzukọ ndi mọnk, ma na-achota otu ato dika ndi ozo: ndi mọnk, ndi nno, ndi nwoke na ndi nwanyi, nabata ndị niile na-eme ihe ike na-ekere òkè na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Buddha ha, mgbochi Islam na Sinhala nationalist. [Foto dị n'aka nri] Isi ụlọ ọrụ ya dị na Sri Sambuddha Jayanthi Mandira, Colombo, nke ụlọ ọrụ Buddhist Cultural Center nwe.
BBS ejirila teknụzụ nkwukọrịta nke oge a dịka ịntanetị mee ihe nke ọma (lee ịmaatụ webpage ya (Bodu Bala Sena webpage 2015) na soshal midia dịka Facebook.Abụ BBS bụ ngwa ọrụ ọzọ dị mkpa maka BBS iji zipu ozi ya. onye egwu Sinhala a ma ama bụ Sunil Edirisinghe, ukwe ahụ na-akpọku ndị Buddha nke agwaetiti ahụ ka ha were ikike iji kpuchido Buddhist megide "ike dị egwu nke Mara" (yabụ ndị agha ga-ebibi Buddha) site na ịmalite "agha dharma" dị ọcha (dharma yuddhayak). E mekwara abụ ọma nke BBS maka nbudata dịka ụda olu na 2013 site n'aka Mobitel nke Sri Lanka Telecom. Dabere na ọkwa BBS, ibudata ụda ahụ ga-enyere aka kwado nzukọ ahụ. Mgbe esemokwu ọha na eze, Mobitel rịọrọ mgbaghara, na-ekwusi ike na a na-emeso BBS dịka ndị ọzọ na-eweta ọdịnaya nke ụda ụda (dabere na usoro nkekọrịta ego).
Ọ bụ ezie na isi ya dị na Sri Lanka, BBS na-anọchikwa anya ụdị mmegharị nke Buddhist na agbụrụ agbụrụ na okpukperechi agbụrụ dị ka ọ na-enweta nkwado site n'aka ndị Budha Buddha Sinhala bi na mba ndị ọzọ dịka Australia, UK na US. Dịka ọmụmaatụ, na 2013 Gnanasara na-eduga abụ mmeghe nke ụlọ nsọ Buddhist Indiana na US
Okwu zuru ụwa ọnụ banyere ụjọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ịgbanwe mgbanwe okpukpe mmadụ bụ akụkụ abụọ dị mkpa nke ịrị elu Buddhist egwu Islam. Ihe ọzọ dị oke mkpa, mana oge niile a na-eleghara anya nke okwu Buddha na-emegide Muslim, metụtara metụtara akụ na ụba. Na Sri Lanka na 2013, ndị BBS kpọrọ ka a machibido ogbugbu Halal. Mgbe afọ ahụ gasịrị, otu onye mọnk BBS ruru ọbụna na-ewepụ onwe ya n'okwu banyere halal, na-aghọ onye mọnk mbụ na akụkọ ihe mere eme na Sri Lanka nke na-etinye onwe ya n'ọkụ. Ikike anụmanụ nwere nnukwu ihe gbasara Buddhist (ọ bụghị naanị n'etiti ndị Buddhist ndọrọ ndọrọ ọchịchị), mana nyocha nke ọma banyere esemokwu halal na Sri Lanka na-egosi na nchekwa nke anụmanụ, na ehi karịsịa, bụ naanị akụkụ nke akụkọ. Na ogbako ogbako na Colombo na 2012, Ven. Gnanissara welitere okwu a kapịrị ọnụ banyere asọmpi azụmahịa Sinhala-Buddhist, na-azọrọ na usoro asambodo nke ịhọtara ihe gbasara ịkwụ ụgwọ ihe gosiri na emeghị ihe ziri ezi banyere ndị na-ere ahịa ụlọ ahịa Sinhala dịka ndị Alakụba mgbe ahụ ga-"kpọta" ụlọ ahịa na - enweghị asambodo halal. "Nke a bụ obodo Buddha Sinhala," Ven. Gnanissara rụrụ ụka, “site n’oge ochie ndị Sinhalese achịala ma nyere ọha azụmaahịa aka iwulite ma na-azụ ahịa ha. Ugbu a, azụmahịa ndị a na-eyi ndị Alakụba a egwu na akara Halal na asambodo naanị ka ha nwee ike ịzụ ahịa na ya. N'elu ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Buddha na Sri Lanka, ya mere, anyị na-ahụ asọmpi akụnụba Sinhala-Muslim, ọkachasị n'etiti ndị na-emepụta ihe oriri na-abụghị nke halal na halal, ebe a na-ere ngwaahịa na nnukwu ụlọ ahịa, yana etu mmadụ ga-esi nye ndị mọnk Buddha nri. ihe nwere asambodo halal na ha. N'ezie, ndị BBS na-edozi nsogbu ndị ahịa Sinhala n'ụzọ doro anya. O kwesịkwara iburu n’uche na e nweela ọtụtụ mwakpo a na-egbu ebe a na-egbu anụ ndị Alakụba, ụlọ ahịa na ụlọ ahịa.
Mkpesa kachasị ike megide BBS nke ime ihe ike na-emegide ndị Alakụba na-echebara usoro ọgba aghara ndị a na-akpọkarị "Ọgba aghara Aluthgama." [Foto dị n'aka nri] Na June 15-16, 2014, ndị Alakụba wakporo ndị Alakụba bi na ndịda obodo Aluthgama, Dharga Town, Valipanna na Beruwela, na-akpata ọnwụ ndị Alakụba atọ, ọtụtụ narị ụlọ na ụlọ ahịa gbara ọkụ nye ndị toro eto na ọtụtụ puku ndị gbara ọsọ ndụ, nke na-emetụta obodo ndị Alakụba. N'ime afọ abụọ tupu ime ihe ike ahụ, ndị BBS zụlitere echiche ịkpọasị site na mgbasa ozi na mgbasa ozi ọha na eze na nkwupụta mgbasa ozi. Enweela ime ihe ike megide obodo ndị Alakụba na mba ahụ n'otu oge ahụ, mana ọgba aghara Aluthgama gosipụtara ọkwa na nzukọ a na-enwetụbeghị ụdị ya (Haniffa et al 2014). Na June 15, 2014, ndị BBS mere nzukọ ọha na eze na Aluthgama mgbe ihe mere n'etiti onye mọnk Buddha na ndị ntorobịa Alakụba atọ. N'okwu ya, BBS General Secretary Gnanasara kwụsịrị site n'ikwu na "n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na emetụ uwe mwụda ọzọ na-acha odo odo, ọ dịghị mkpa ịga ndị uwe ojii, ka iwu nke oke ọhịa weghara" (nke e hotara na Haniffa et al 2014: 19). Ka oge na-aga, ọgbakọ ahụ wee ghazie ndị mmadụ n’otu obodo wee rute n’ọgba aghara aghara. Ọ bụ ezie na usoro ọgụgụ oge nke ihe omume (na ọrụ ndị BBS ma ọ bụ ndị ntorobịa Muslim nọ na mpaghara ahụ ka na-edoghị anya na mgba), o doro anya na ọgba aghara ahụ hapụrụ obodo ndị Alakụba obodo ahụ nke mebiri emebi karịa ndị agbata obi Buda Buddhist.
E nyewo BBS na ọtụtụ obere ìgwè dị iche iche yiri nke ahụ na Sri Lanka akara "ndị agha" ma ọ bụ "ndị na-eme ihe ike," site na mgbasa ozi ụwa ma ọ bụ ndị mmegide obodo. Ndi otu a ekwenyeghi na udiri aha a, ebe ha agaghi etinye aka na agha, ma obu megharia nku agha. Ka o sina dị, ọtụtụ n'ime ndị otu nrụgide Buddhist nke oge a na-etinye aka na ndị agha ikwu okwu, na-eji ma ọ bụ “ike” (bala) “Usuu ndị agha” (sēna) na aha nzukọ ha, a na-ebo ha ebubo na ha na-etinye aka na ime ihe ike megide Muslim. Dị ka a tụlere n’elu, ime ihe ike dị otu ahụ gụnyere mwakpo a na-eme na ụka ụka Ndị Kraịst, mwakpo nke ụlọ ahịa ndị Alakụba nwere na Colombo, na mwakpo zuru ebe niile n’obodo Alakụba na Aluthgama na 2014. Ọchịchị aka ike nke Onye isi ala Rajapaksa (2005-2015) gbara ume ma chebe ndị Buddha dị egwu a. mmegharị site na ịchekwa nkwado ndị uwe ojii tacit (site na ịhapụ ha ka ha rụọ ọrụ dịka ndị nche) ma mesịa site na enweghi ntaramahụhụ. Ọzọkwa, nwanne Onye isi ala, onye odeakwụkwọ na-agbachitere mgbe ahụ bụ Gotabaya Rajapaksa, n'ọtụtụ oge kwupụtara n'ihu ọha na ya kwadoro ndị mọnk BBS. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na ndị BBS n'onwe ha ejighi ngwa agha, ekwenyere ebe niile na ndị agha steeti a nwere ike ịchịkọta na nkwado ha.
Site na ọchịchị ọhụrụ nke Maithripala Sirisena (2015-) nkwado ọha na eze na oghere ọchịchị maka ụdị mmegharị ahụ belatara. Ekwesiri ighota na ndi otu ndi Buddhist na-emegide ndi Sri Lanka bu ihe di ndu nke ndu ochichi nke Sri Lanka, ya mere ohere ha di ugbu a maka oru adighi egbo mkpa di ohuru na abia.
Image # 1: Foto nke onye nchoputa BBS, Ven. Kirama Wimalajothi.
Image # 2: Foto nke Ven. Galagoda Atte Gnanasara, onye odeakwụkwọ ukwu nke BBS.
Image # 3: Foto nke Ven. Gnanasara na-ekwu okwu na nnọkọ oriri na ọ rallyụ Bụ BBS na Maharagama, nke dịpụrụ adịpụ nke Colombo, na 2013. Onyonyo # 4: Foto nke ndị ọmịiko BBS na-eme ngagharị iwe megide usoro asambodo Halal na Sri Lanka. Onyonyo # 5: Ntughari akara nke BBS.
Foto # 6: Foto nke igwe mmadụ na "ọgba aghara Aluthgama" na 2014 Foto # 7: Foto nke onye bụbu ode akwụkwọ nchekwa, Gotabaya Rajapaksa, na mmemme BBS na 2013.
Bodu Bala Sena webusaiti. 2015. Nweta site na http://www.bodubalasena.org na 4 August 2016.
Degalle, Mahinda. 2016. "'Ndị agha nke ike Buddha' na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Sri Lanka '." Pp. 121-44 n'ime Buddha na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke Hiroko Kawanami dere. London: Palgrave MacMillan.
Frydenlund, Iselin. 2016. "Ihe Mgbasa Ozi Pụrụ Iche site na Universalist Pụtara: The Paradoxes nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Revivalism Buddhist na Sri Lanka." Pp. 97-120 na Buddha na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke Hiroko Kawanami deziri .. London: Palgrave MacMillan.
Frydenlund, Iselin. 2015. "Nbili nke Buddha-Muslim esemokwu na Asia na ohere maka mgbanwe." NOREF (Ebe Udo Na-ahụ Maka Udo nke Norwegian): Akụkọ NOREF, Disemba 15 http://www.peacebuilding.no/Regions/Asia/Publications/The-rise-of-Buddhist-Muslim-conflict-in-Asia-and-possibilities-for-transformation na 4 August 2016.
Haniffa, Farzana. 2016, na-abịa. "Akụkọ na-akpata nke Aluthgama." Na Buddhist ndị isi na ndị Alakụba pere mpe, nke John Clifford Holt dere. New York: Mahadum Oxford University.
Haniffa, Farzana et al. 2014. “Ebee Ka Ndị Agbata Obi Nile Gara? Ọgba aghara Aluthgama na nsonaazụ ya. Ebumnuche Factchọta Eziokwu na Aluthgama, Dharga Town, Valipanna na Beruwela. ” Colombo: Iwu na Society Trust.
Schontal, Benjamin na Matt Walton. 2016. “Ọchịchị Buddhist (Ọhụrụ)? Symmetries na Specificities na Sri Lanka na Mianmaa. ” Buda Buddha 17: 81-115.